Peeji nke 1 nke 52 Nsonaazụ 1 - 15 nke 775
Ekelere George Arana (Ugo Rotorcraft Simulations) maka ịtọghata ihe mbụ a na-akwụ ụgwọ add-on onye obodo FSX na P3D v4 format. Biko rịba ama na helikopta a ga-amalite site na Ọnọdụ Cold & ọchịchịrị, ọrụ Ctrl + E adịghị arụ ọrụ, ị ga-agụ akwụkwọ ọgụgụ ahụ nke ọma n'ihi na ọ dịghị mfe s ... GỤKWUO
Embraer ERJ 135 Otutu FSX & P3D -ekpo ọkụ emelitere
Nke a bụ ezigbo ọmarịcha nlele nke zuru oke nke Embraer ERJ-135 nke ndị otu POS emeburu. Nke a add-on bụzi nwa afọ FSX yana ejikwa ya Prepar3D v4 na v5. Ekele dịrị Speedbird77 maka ntụgharị a. Ejikọtara ya na oke ọmalịcha nnuku, 2D Panel, FMC, GPWS, V-Speeds Ca… GỤKWUO
Embraer ERJ 145 Otutu FSX & P3D -ekpo ọkụ emelitere
Ebube igbo hiri nne ERJ 145 nwa ala FSX, ma dakọtara Prepar3D v4 na v5. Ekele dịrị Speedbird77 maka ntụgharị a. Ejikọtara ya na ọmarịcha kokpiiti dị egwu, 2D Panel, FMC, GPWS, V-Speeds Callout, Ọrụ Ground na 16 repaints (American Eagle - United Express - KLM Excel - British Airways Njikọ… GỤKWUO
Nnukwu ụgbọ elu ndị amịpụtara na njedebe nke Agha Secondwa nke Abụọ, a na-etinye ngwugwu a na ihe eji ebi ndụ abụọ, oke ọkpọkọ zuru oke na ụda ahaziri iche. Ekele Milton Shupe na William Ellis maka imepụta nke a add-on. Ọzọkwa, dakọtara na Prepar3D v4 na v5.Superb ala njikwa, gburugburu e ... GỤKWUO
Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D -ekpo ọkụ
McDonnell Douglas MD-80 Series Multi-Livery FSX & P3D -ekpo ọkụ